Vaovao - Rising Star of Home decor ——- Panelin'ny WPC anatiny
Fa maninona DEGE
Tantara sy kolontsaina
Fampirantiana & Fitsidihana
1500mm Spc Flooring
1800mm Spc Flooring
Hardwood Spc Flooring
Marbra Spc Flooring
Flooring Spc vaovao
Rindrina misy lamina EIR
Flooring Laminate any Herringbone
Flooring Laminate avo lenta
Farafara misy lamina misy hazavana sy maizina
Flooring Laminate tsy tantera-drano
Vato vita amin'ny visy vato
Flooring Vinyl vita amin'ny hazo
Flooring amin'ny injeniera
Chevron Engineered Flooring
Fitaovana vita amin'ny mekanika mahazatra
Flooring Engineered Herringbone
Tavoahangy karipetra vaovao
Tavoahangy Karipetra Nylon
Tavoahangy Karipetra Polypropylene
Decking & tile
Rindrina anaty trano
Takelaka rindrina UV Mamirapiratra UV
Takelaka rindrina SPC vita amin'ny vato voajanahary
WPC Wall Sheet
Fiambenana WPC sy Pergola
Wpc Haingo haingo
Andalana haingon-trano alimina
Kintana miakatra amin'ny haingon-trano ——- Panina amin'ny rindrina WPC anatiny
Takelaka rindrina vita amin'ny hazo-plastika (WPC) tena tian'ny mpanjifa noho ny fahombiazany ambony, ny fanoherana ny triatra sy ny fiovana, sns.
Inona no WPC rindrina WPC?
Takelaka rindrina vita amin'ny plastika vita amin'ny hazoTsy mora simba, mando-hamandoana, manaporofo ny bibikely, mora diovina, ary manana fananana fiarovana ny tontolo iainana. Kanto sy malala-tanana, loko isan-karazany, ary fampiharana maro karazana. Raha tokony ho fitaovana anti-harafesina, dia ampiasaina amin'ny rindrina telo habe sy haingon-trano amin'ny rindrina anatiny.
Dege dia mifantoka amin'ny fampandrosoana sy famokarana plastika vita amin'ny hazo foamed PVC, izay ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny famokarana akora plastika hazo sariaka tontolo iainana ho an'ny haingon-trano anatiny.
Tombony amin'ny takelaka rindrina WPC:
1. fiarovana ny tontolo iainana:WPC rindrina tontonana dia karazana fitaovana fiarovana tontolo iainana vaovao. Ny lokony dia tsy nolokoina loko, fa vita tamin'ny hazo sy plastika, izay mampihena ny atin'ny zavatra manimba toy ny formaldehyde, ary azo antoka sy sariaka amin'ny tontolo iainana.
2. Somary ambany ny fatiantoka: ny tontolon'ny rindrin'ny wpc dia poakaty ao anatiny, noho izany dia betsaka kokoa ny fitaovana azo tehirizina, ary mora kokoa ny vidiny.
3. Fiainana maharitra: Raha ampitahaina amin'ny hazo tsotra, ny androm-piainan'ny takelaka rindrina WPC dia mety hahatratra 10-15 taona, izay mamonjy ny vidiny sy ny fotoana fanoloana fanaka.
4. Azo ampiharina tsara:Ny takelaka rindrina WPC dia azo ampiharina mafy. Tsy mahatohitra abrasion fotsiny izy io, afaka miaro tsara ny rindrin'ny tranobe, fa manana fahatsapana telo-habe sy sosona tsara ihany koa, miaraka amin'ny maripana tsy tapaka, ny fihenan'ny tabataba ary ny fiarovana ny taratra. , Azonao atao ihany koa ny manitsy ny rivotra, mahatohitra fanoherana ary misy fiantraikany amin'ny fanoherana ary fiasa hafa.
5. Haingo tsara:Ny takelaka rindrina WPC dia afaka mampiasa faritra miasa isan-karazany mba handravahana ny fomba sy ny tsiro isan-karazany, ary afaka mampifanaraka sy mampivondrona ny fomba ankapobeny, izay fampisehoana tsara ny fomba manokana sy ny tsiro amin'ny efitrano. Noho izany, ny tontonana amin'ny rindrina ankapobeny dia misy vokany tsara haingo.
Fotoana fandefasana: Sep-07-2021